အသီးအနှံနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များပိုမိုစားနည်း ၅ တစ်ရက် | Santotoro
အသီးအနှံနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည်ငါတို့အတွက်ကောင်းသည်ကိုငါတို့အားလုံးသိကြသော်လည်းအဘယ်ကြောင့်နည်း။ ကောင်းပြီ၊ ငါတို့မကြာသေးမီကလေ့လာမှုကိုပြန်သွားလျှင်သုတေသီများကအစိမ်းရောင်နှင့်ပြည့်နေသောပန်းကန်တစ်လုံးသည်သက်တမ်းကြာရှည်စွာနေထိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းများကိုတိုးပွားစေပြီး၊ နာတာရှည်အခြေအနေများစွာ၏ကင်ဆာမှဆီးချိုရောဂါအမျိုးအစားအထိလျှော့ချနိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
မိသားစုဆရာဝန်နှင့်အာဟာရဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ Jan Sambrook ကနောက်ထပ်ရှင်းပြသည်။
သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များစားသုံးမှုနည်းပါးခြင်းကအစာခြေစနစ်၏ ၁၉% ခန့်၊ နှလုံးရောဂါ၏ ၃၁% နှင့်လေဖြတ်ရောဂါ ၁၁% ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။
မိသားစုဆရာဝန်ဒေါက်တာ Rupy Aujla ကသဘောတူသည် သူဆရာဝန်၏မီးဖိုချောင်သုံးစာအုပ်တွင်သူကဤသို့ပြောခဲ့သည် -“ သင်၏သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စားသုံးမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်လေဖြတ်ခြင်း၊ ကင်ဆာနှင့်နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ အပင်အများစုကိုစားပါ၊ ပို၍ ကျန်းမာသန်စွမ်းသော၊ အနာရောဂါကင်းတဲ့ဘဝကိုဖြည့်ဆည်းပေးတယ်။ “
ငါတို့ရွေး မကြိုးစားဘဲဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေဘယ်လိုစားရမလဲ အားလုံးကိုကြည့်ရန်
သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည်ဗီတာမင်များနှင့်ဓာတ်သတ္တုများပေါများပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုကျန်းမာစေပါသည်။ ၎င်းတို့တွင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပျက်စီးစေသောဓာတုပစ္စည်းများမှကာကွယ်ပေးသည်ဟုယူဆရသော antioxidants ဟုခေါ်သောဓာတုပစ္စည်းများပါရှိသည်။
သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုဖိုင်ဘာဖြင့်ထုပ်ပိုးထားသည်။ ၎င်းသည်ကိုလက်စထရောအဆင့်ကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကိုတည်ငြိမ်စေရန်ကူညီနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ဖိုင်ဘာသည်သင့်ကိုပုံမှန်စောင့်ရှောက်ရန်နှင့်ဝမ်းချုပ်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ကူညီသည်။
သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များစားခြင်းသည်အဆီ၊ ဆားနှင့်သကြားဓာတ်မြင့်မားသောအခြားအစားအစာများကိုအစားထိုးရန်အထောက်အကူပြုသည်၊ ၎င်းသည်ဤအစားအစာနှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါများကိုကျွန်ုပ်တို့လျော့နည်းစေသည်။
အဘယ်အရာကိုတစ် ဦး အဘို့မှတ်အဖြစ်?
Sambrook သည်တစ်နေ့လျှင်သင်၏ငါးရက်မှတစ်လုံးအဖြစ်မှတ်ယူရမည့်အရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ရှုပ်ထွေးသူများအတွက်အောက်ပါလမ်းညွှန်ကိုအကြံပြုသည်။
ပန်းသီး၊ သစ်တော်သီး၊ ငှက်ပျော၊ လိမ္မော်သို့မဟုတ်ဖရဲသီးကဲ့သို့သောအသီးကြီးတစ်ခု။
သေးငယ်သောအသီးများဖြစ်သော Plum, Kiwis, Satsumas, Clementines ။
ထိုကဲ့သို့သောစပျစ်သီး, စတော်ဘယ်ရီ, Raspberry, ချယ်ရီသီးအဖြစ်သေးငယ်တဲ့အသီးကိုသီး၏တစ်ခွက်။
သစ်သီးသုပ်၊ စွပ်ပြုတ်သစ်သီးသို့မဟုတ်စည်သွပ်ဗူး ၂ ခုကြီးမားသောဇွန်း။
လတ်ဆတ်သောသစ်သီးဖျော်ရည်တစ်ခွက် (၁၅၀ ml) ။
မည်သည့်ဟင်းသီးဟင်းရွက် (ဇွန်း ၂ ခွက်ခန့်) ၏ပုံမှန်အပိုင်းတစ်ပိုင်း။
သစ်သီးဖျော်ရည်နှင့် ပါတ်သက်၍ စကားလုံးတစ်လုံး
Sambrook မှ ၁၅၀ မီလီမီတာအသီးဖျော်ရည်တစ်ခွက်သည်သင်တစ်ခွက်ထက် ပို၍ သောက်သုံးလျှင်ပင်သင်၏“ တစ်ရက်လျှင်ငါးရက်” မှတစ်လုံးသာဖြစ်သည်ဟုထောက်ပြသည်။
သို့သော်သစ်သီးဖျော်ရည်များသည်ဓာတ်ငွေ့ရည်များ၊ squash များနှင့် ‘သစ်သီးဖျော်ရည်အချိုရည်များ’ နှင့်ဝတ်ရည်များတွင်မတွေ့ရှိရသေးသောအကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိနေသေးသည်။ ဤအရာအားလုံးတွင်သကြားထည့်ထားသော်လည်းစင်ကြယ်သောအသီးဖျော်ရည်ကိုသကြားထည့်ရန်ခွင့်မပြုပါ။ ထို့အပြင်သစ်သီးဖျော်ရည်သည်သံဓာတ်စုပ်ယူမှုကိုအစားအစာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုလျှင်အထောက်အကူပြုသည်။ ဖျော်ရည်တစ်ခွက်သည်သင်၏ RDA (အကြံပြုထားသည့်နေ့စဉ်ထောက်ပံ့ကြေး) ၏ ၂၅% ကိုထောက်ပံ့ပေးပြီးသင့်အစားအစာ၌ပိုတက်စီယမ်ကိုအထောက်အကူပြုသည်။ ၎င်းတွင်အပြောင်းအလဲကြောင့်ထိခိုက်မှုမရှိသော phytonutrients အမျိုးမျိုးပါဝင်သည်။ လိမ္မော်သီးဖျော်ရည်တစ်ခွက်သည်ဗီတာမင်စီ၏ RDA ၏ ၁၀၀% ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
UCL အဖွဲ့၏တွေ့ရှိချက်အရတစ်နေ့လျှင်သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ငါးမျိုးကိုအကြံပြုထားခြင်းသည်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုလျော့နည်းစေနိုင်သော်လည်းအကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ၁၀ ပုံခန့်စားသုံးခြင်းမှအကျိုးဖြစ်ထွန်းသည်။ သို့သော်ဤလေ့လာမှုနှင့်အခြားသုတေသနပြုချက်များအရသင်စားသောသစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များများလေလေ၊ ပိုကောင်းလေ၊ ၅ ရက်သည်လူအများစုအတွက် ပို၍ လက်တွေ့ကျသောပစ်မှတ်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအင်္ဂလန်မှအာဟာရပညာရှင်ဒေါက်တာ Alison Tedstone ကဘီဘီစီကိုရှင်းပြသည်မှာတစ်နေ့လျှင်သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ငါးခုကိုစားသုံးခြင်းသည်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသော်လည်းသစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များပိုမိုစားသုံးရန်ဖိအားပေးမှုသည်လက်တွေ့မကျသည့်မျှော်လင့်ချက်များဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဒါဟာသင်ထင်ထားတာထက်ပိုလွယ်တယ်။ မကြာမီသင်ထိုသစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုမည်သည့်ဟင်းပွဲ၌အရောင်၊ အရသာနှင့်အရောင်ကိုပေါင်းထည့်သည်ကို ထပ်မံ၍ တွေ့ရလိမ့်မည်။ ဤတွင်သင်၏အစားအစာတွင်အာဟာရများကိုထည့်သွင်းရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းအချို့ဖြစ်သည်။
မည်သည့်အသီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွင်သင်လိုအပ်သောအာဟာရများမပါ ၀ င်သောကြောင့်အမျိုးမျိုးသောအရသာအမျိုးမျိုးရှိသည့်အသီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များပါဝင်သည်။ အဆိုပါ beige နစ်နှင့်သက်တံ့ဘက်လျက်။
“ အသီးအနှံအမျိုးမျိုးသည်ကွဲပြားခြားနားသောဗီတာမင်များ၊ ဓာတ်သတ္တုများနှင့် antioxidants ပေါင်းစပ်ခြင်း” ကိုဆိုလိုသည်။
မျိုးစုံသည်ဘဝ၏အမွှေးအကြိုင်ဖြစ်သည် – ထို့ကြောင့်သင်တစ်ခါမျှမမြည်းဖူးသောသစ်သီးတစ်မျိုးသို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုစမ်းကြည့်ပါ။ သင်လုံးဝချစ်သောအရာတစ်ခုကိုသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။ အပတ်တိုင်းသစ်သီးသစ်တစ်မျိုးကိုစမ်းကြည့်ပါ။
နံနက်စာကျွေးရန်ကုန်တယ်ငှက်ပျောသီး, ပန်းသီးသို့မဟုတ်သစ်သီးခြောက်တို့ကိုထည့်ရန်ကြိုးစားပါ။ သစ်သီးဒိန်ချဉ်အစားသစ်သီးတစ်လုံးနှင့်သဘာဝဒိန်ချဉ်ကိုယူပါ။
အဓိကအစားအစာအများဆုံးအနည်းဆုံးဟင်းသီးဟင်းရွက် ၂ မျိုးပါ ၀ င်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ခရမ်းချဉ်သီးသန့်စင်နှင့် / သို့မဟုတ်ခရမ်းချဉ်သီးများကိုခေါက်ဆွဲဆော့စ်အဖြစ်ထည့်ပါသို့မဟုတ် casseroles နှင့် stews များထဲသို့ထည့်ပါ။
တစ်ခါတစ်ရံတွင်အာဟာရများဆုံးရှုံးခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်ဆီးခြင်းများဖြစ်သဖြင့် Sambrook သည်ဖြစ်နိုင်လျှင်အသီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုကုန်ကြမ်းစားရန်နှင့်၎င်းတို့ကိုအလွန်အကျွံချက်ပြုတ်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်အကြံပြုသည်။
ဆူပွက်မယ့်အစားခိုးတာ၊ ရေပူတာ၊ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်လုပ်တာမျိုးလုပ်ပါ။ ဒီနည်းလမ်းတွေဟာဆုံးရှုံးသွားတဲ့အာဟာရပမာဏကိုလျှော့ချဖို့ကူညီပေးတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေပြုတ်မယ်ဆိုရင်ရေကိုထိတ်၊ ဝက်အူချောင်းနဲ့ဟင်းချိုထဲမှာသုံးနိုင်တယ်။
သူတို့အားနွေးထွေးသော sarnies ချ။ ထုပ်ပိုးထားသောနေ့လည်စာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ချယ်ရီခရမ်းချဉ်သီးများ၊ မုန်လာဥတုတ်များ၊ apricots ခြောက်များသို့မဟုတ်အခြားအသီးများနှင့် ပတ်သက်၍ ကော။ hummus တစ်အိုးလည်းရေတွက်! ငှက်ပျောသီးနှင့်မြေပဲထောပတ်သားညှပ်ပေါင်မုန့်သည်နောက်ထပ်အကြံဥာဏ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အသားညှပ်ပေါင်မုန့်ပြုလုပ်ရာတွင်အခြားလွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခုမှာသခွားသီး၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ဆလတ်၊
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ပဲများ (ပဲဖုတ်သောပဲများပါ ၀ င်သည်။ ) နှင့်ပဲများဖြင့်အစားအစာများကိုအမြောက်အများထုတ်ယူပါ။ ဥပမာအားဖြင့် Bolognese ပြုလုပ်သည့်အခါမှိုများ၊ ငရုတ်ကောင်းများနှင့်အချို့သောကျောက်ကပ်များကိုထည့်ပါ။ ဒါကအစာထပ်မံစားဖို့ကူညီပေးတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်စုံတစ်ခုကိုသစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအဖြစ်သတ်မှတ်သည်ဟုထင်ရသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့မှားယွင်းနိုင်သည်။ Boo! Sambrook ၏အဆိုအရဤတွင်ယေဘူယျနားလည်မှုလွဲမှားခြင်းအချို့ရှိသည်။
အာလူး၊ ယက်စ်၊ ပီလောပီနံတို့မှာအခြားအရာတွေထက်ဓာတ်ပါဝင်မှုပိုများတာကြောင့်သူတို့ကတစ်ပိုင်းတစ်စအဖြစ်မသတ်မှတ်ပါဘူး။ အာလူးကောင်းကောင်းရေတွက်ပါ
၎င်းတွင်သစ်သီးများအနည်းငယ်သာပါဝင်ပြီးသကြား၊ အဆီနှင့်အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများလည်းပါ ၀ င်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယင်းတို့ကိုအဟာရအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်ကြိုးစားသင့်သည်။
“ ဒီအများအားဖြင့်အနည်းဆုံးအသီးများပါဝင်ပြီးသကြားဓာတ်များများပါဝင်သည်။ “
ခရမ်းချဉ်သီး ketchup, ယိုနှင့်အာလူးကြော်
ဆားထဲမှာသကြားပါဝင်မှုမြင့်မားတယ်။ အစားခရမ်းချဉ်သီး puree ။
ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းတစ်ခုတွင် ‘တစ်နေ့ငါးရက်’ အစာစားနည်း
အထူးသဖြင့်စူပါမားကက်များကသင့်အားမုန့်နှင့်အသင့်စားအစားအစာများကို“ ၀ ယ်ယူပါ” ဟုကမ်းလှမ်းသည်။ သို့သော်အနည်းဆုံးအသီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အနည်းဆုံးငါးခုကိုနေ့စဉ်ရရှိခြင်းသည်စျေးကြီးရန်မလိုပါ။ သတိရပါ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည်အသားထက်အမြဲတမ်းစျေးသက်သက်သာသာသာဖြစ်သည်ကိုသတိရပါ။
Sambrook က “ စျေးကွက်ကိုအသုံးချပါ။ သင်အဲဒီမှာစျေးတွေမကြာခဏရနိုင်တယ်။ စူပါမားကက်များမှာအသီးများသောအသီးများကိုအမြဲရွေးပါ။ မကြာခဏဝယ်ယူခြင်းထက်များစွာစျေးသက်သာသည်”
ရာသီ၌ ၀ ယ်ရန်ကြိုးစားပါ၊ ထိုအချိန်တွင်အသီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည်စျေးသက်သက်သာသာသာဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အေးခဲနေသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုလည်းမပယ်ပါနှင့် – ၎င်းသည်အာဟာရရှိသည့်အပြင်မကြာခဏစျေးသက်သက်သာသာနှင့်၎င်းသည်မြန်လွန်းသောကြောင့်စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ ထို့ပြင်သစ်သီးဝလံများနှင့်သစ်သီးများသည်ရေရည်ထက် ပို၍ သစ်သီးဖျော်ရည်များ၌သာရွေးချယ်သင့်သည်။ ဒါ့အပြင်သူတို့ဟာဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေထက်ဗီတာမင်ပါဝင်မှုကိုကြာရှည်စွာထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။
ပဲနှင့်ပဲမျိုးစုံကိုစွပ်ပြုတ်များထဲသို့ထည့်ခြင်းသည်ဈေးကြီးသောအသားကိုစားနိုင်သည်။ ပိုကောင်းသည့်အပြင်ပဲမျိုးစုံပါ ၀ င်သောနှေးသောချက်ပြုတ်ထားသောစွပ်ပြုတ်များကသင့်အားစျေးသက်သက်သာသာနှင့်အမျှသင်၏ဟင်းသီးဟင်းရွက်စားသုံးမှုကိုမြှင့်တင်ရန်အသင့်ပြင်ဆင်ထားသောအသားများကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ မင်းတို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုအလျင်အမြန်မစားနိုင်ဘူး၊ သူတို့ကသင့်ရဲ့ရေခဲသေတ္တာရဲ့နောက်ဖက်မှာအနည်းငယ်ညှိုးငယ်နေတယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုဟင်းချိုအဖြစ်ပြောင်းပါ။ သင်တောင်မှအကြာတွင်စားရန်၎င်းကိုအေးခဲနိုင်သည်။
ရုတ်တရက်ဆိုလျှင်တစ်နေ့လျှင် ၁၀ လုံးမဖြစ်နိုင်ပုံမပေါ်ပါ။ အစပိုင်းမှာတော့ငါတို့ဖုတ်ထားတဲ့ကော့ကို ratatouille နဲ့အတူ whirl whirl ပေးပါ။